Gịnị Celebrity Photo ntapu Pụrụ Ịkụziri Anyị Banyere Data Nche
Prince Harry na Miley Cyrus-akụziri anyị banyere Data Management na Nche
Scarlett Johansson, Prince Harry na egwu Al - ọ bụ ezigbo mfe ịhụ ihe ha nwere na nkịtị. Ha niile na-ama ọgụgụ. Otú ọ dị, ha na ọnụ ọgụgụ nwetara a obere ihe ma ama mgbe ha onwe photos e 'leaked' online. M obi m ịrịọ mgbaghara maka na egwu Al imagery.
Otu elezighị flash nke celebrity akpụkpọ mgbe niile na-eme ka akụkọ - otú kpọmkwem ime ihe ndị a scandalous photos-eme ka ya anya kpakpando onye ntị na na na World Wide Web? E nwere ihe ole na ole ndapụta:
Old ekwentị Nwela tụpụrụ / traded na / rere / recycled wdg na onye kpebie ime obere igwu ala.
Ekwentị ego n'anya furu efu ma ọ bụ zuru na onye na-azọrọ funahụrụ 'n'ezi ihe.
Ọ bụrụ na ọ bụ ọnụ ọgụgụ otu, nke ahụ bụ ha onwe ha ruuru. Number abụọ ma ọ bụ atọ Otú ọ dị, nwere ike ime ka isi nsogbu gụnyere mfu ego, aha ọnwụ, ịgba akwụkwọ n'ihe ize ndụ na ndị ọzọ. Ma eleghị anya, gị onwe gị na data ihihi agaghị mkpuchi nke a tabloid ma ihe ize ndụ ma nwere emebi ka bụ otu ihe ahụ.
Na 1,75 ijeri smartphone ọrụ n'ụwa nile, na isiokwu nke data management na nche bụ ihe dị mkpa onye na-aghọta. Onye ọ bụla maara na mgbe na-agafe na ekwentị na ọ dị mkpa ka ihichapụ ozi na data anya nke ya. Ọtụtụ ime nke a na a factory nrụpụta - N'ụzọ dị mwute, ọ na-ewe bụ a ọchịchọ ịmata na onye nkeji ole na ole nke Googling sere gị ochie data si ogbu nke a yiri ide ekwentị.
Ebe a na Wondershare, anyị chọrọ ịhụ otú data anyị nwere ike sere anya nke a random ekwentị. Ya mere - anyị zụrụ a na-eji ekwentị anya nke EBay. Iji Dr. Fone (iOS 9, iPhone 6S Plus / 6S akwado), anyị na-enwe ike naghachi n'elu 2,400 photos, 100+ videos, 18 na kọntaktị na ọtụtụ narị ndị ọzọ dị iche iche faịlụ. Ị pụrụ ịhụ nkọwa ndị ọzọ banyere na nnwale ebe a.
Obi siri m ike na-ere ákwà a na ekwentị mere agaghị akpachara etinye ha na ekwentị na eBay ka chalked zuru nke onye ozi. Nke a bụ ihe mere ị ga-eji a na-adịgide adịgide data nchicha dị ka SafeEraser. SafeEraser (iOS 9, iPhone 6S Plus / 6S akwado) bụ niile agwụ niile - nnọọ ihe bụ recoverable, n'ọnọdụ ọ bụla. Na-adịghị ọbụna Dr. Fone nwere ike nweta ihe data azụ.
Anyị na-niile mụtara ihe bara uru site Justin Now na Miley Cyrus - awụ akpata oyi n'ahụ ziri ezi?
Doro anya na ha echeghị nke na-esi nke ọjọọ data management mgbe ha anụ ntị photos see net. Ma eleghị anya, ị na-adịghị ha kpakpando ike, ma na kwesịrị ekwesị ihe ọmụma na ojiji nke ọkachamara data management software, ị na-eme nwere ike iji chebe onwe gị na gị data.
Na ọzọ, m nwute banyere na dum egwu Al ihe.
Olee otú ịrụzi Hal.dll efu Error
> Resource> Utility> Gịnị Celebrity Photo ntapu Pụrụ Ịkụziri Anyị Banyere Data Management na Nche